Josep Maria Bartomeu oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Barcelona weeraryahanka Valencia ee Rodrigo Moreno – Gool FM
Josep Maria Bartomeu oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Barcelona weeraryahanka Valencia ee Rodrigo Moreno
(Barcelona) 28 Jan 2020. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa qiray inuu jiro qorsho ay kula soo saxiixanayaan weeraryahanka Valencia ee Rodrigo Moreno kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bishan Janaayo.
Rodrigo Moreno ayaa qeyb ka ah magacyada tiro dhowr weeraryahano ee lala xiriirinayo kooxda Barcelona si ay u noqdaan badelka Luis Suárez oo mudo afar bilood ah garoomada dhaawac kaga maqnaan doono.
Haddaba Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu oo wax laga weydiiyay wararka Barca la xiriirinaya Rodrigo Moreno ayaa wuxuu ku jawaabay:
“Haatan wuxuu saaran yahay miiska maamulka farsamada ee kooxda si uu u bedelo Luis Suárez”.
Erayada Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa waxay xaqiijinayaan in kooxaha Barca iyo Valencia uu xiriir dhax maray si ay heshiis u gaaraan.
Laakiin wargeysyada qaar ee ka soo baxa gudaha Spain ayaa waxay tilmaamamayaan in howsha aysan aheyn wax fudud, sababa la xiriira dhowr arrimood oo ay ka mid tahay habka loo dhameystirayo heshiiska.
Barcelona ayaa dooneysa in heshiiska uusan qeyb ka noqon shuruud ku qasbi karta inay si toos ah ula saxiixato, kaddib marka uu dhamaado heshiiska amaahda ah dhamaadka xilli ciyaareedkan, halka Valencia ay ku adkeysaneyso in dooqa iibsashada ay khasab tahay, isla markaana ay bixiyaan 60 milyan euro bisha June ee soo socota.
Arsenal oo u gudubtay wareegga shanaad ee Koobka FA Cup-ka kaddib markii ay ka adkaatay Bournemouth… + SAWIRRO